Anosibe Misy andiana mpanendaka manafika sady midaroka
Mpanendaka eny Anosibe Sady manapaka tanana no maka vola
Mirongatra ny asa fanendahana miaro fandratrana olona eny Anosibe ao anatin’ny Boriborintany fahefatra.
Efa tena mihoa-pefy ary feno fahasahiana ireo mpanendaka ankehitriny.
Tsy vitan'ny mangalatra fa midaroka avy hatrany. Ny tena loza dia tsy mandeha irery fa manao andiany mihitsy. Omaly tetsy Anosibe sahabo tamin' ny 6ora sy sasany hariva, trangana sintomahery miampy daroka miisa telo no niseho tao anatin' ny 10 minitra. Lasibatra tamin'izany ny tovovavy iray, renim-pianakaviana iray sy ny zanany ary lehilahy iray no niharan' ny herisetra. Toerana telo samihafa no nisian'ireo tranga ireo ary andiana mpanendaka samihafa ihany koa saingy ny fisehoany no mitovy. Mody manadala ny iray, tampoka avy eo akarapoky ny hafa amin'ny tany ary ny sasany midaroka dia ny hafa mangarona entana. Tena mampalahelo satria na tsy manohitra azy ireo aza dia darohiny avy hatrany. Tena efa miaina tanteraka ao anatin'ny gaboraraka isika mila fandraisana fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana farany izay haingana.